Sean and Kim Doyle
Kim grew up in Zimbabwe. Her parents, Chris and Joyce Goppert served with TEAM Zimbabwe for 42 years. Her grandparents, Norm and Thelma Everswick served in a pioneering role with TEAM Zimbabwe for over 40 years as well.
Sean and Kim have served in Zimbabwe for 8 years in church planting, church development, theological education, and orphan related ministries. Sean has served for many of those years as a professor, Academic Dean and Principal at the Harare Theological College in Zimbabwe. Both Kim and Sean have also served in various support roles within TEAM Zimbabwe.
Sean and Kim feel the Lord’s clear leading to return to Zimbabwe to assist the church by training local pastors at the Harare Theological College, assisting local churches in need of biblical teaching/preaching, leading various Bible studies to disciple national Christians, assisting in church outreaches to orphans and widows and to encourage and support missionaries who are working diligently in this difficult field.